2 Ihe E Mere 22 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Abụọ 22:1-12
Ehazaya malitere ịchị Juda (1-9)
Atalaya weghaara ọchịchị n’ike (10-12)
22 Ndị bi na Jeruselem wee chie Ehazaya ọdụdụ nwa ya eze ka ọ nọchie ya, n’ihi na ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga ha na ndị Arab so bịa ebe ndị Izrel mara ụlọikwuu gburu ndị niile tọrọ ya.+ Otú a ka Ehazaya nwa Jehoram si malite ịchị ndị Juda.+ 2 Ehazaya dị afọ iri abụọ na abụọ mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịkwara otu afọ na Jeruselem. Aha nne ya bụ Atalaya+ nwa nwa* Ọmraị.+ 3 Ọ nọkwa na-akpa àgwà ka ndị ezinụlọ Ehab,+ n’ihi na ọ na-eso ndụmọdụ ọjọọ nne ya na-enye ya. 4 Ọ nọkwa na-eme ihe dị njọ n’anya Jehova, otú ndị ezinụlọ Ehab mere, n’ihi na ọ bụ ha na-agwa ya ihe ọ na-eme mgbe nna ya nwụrụ. Ihe a kpatakwaara ya nsogbu. 5 O mere ihe ha gwara ya, gaa soro Jehoram nwa Ehab eze Izrel lụso Hazel+ eze Siria agha na Remọt-gilied.+ Ọ bụkwa ebe ahụ ka ndị ọgba ụta merụrụ Jehoram ahụ́. 6 Jehoram lawaziri Jezril+ ka ọ nọrọ ebe ahụ ka ahụ́ ahụ e merụrụ ya laa. E merụrụ ya ahụ́ ahụ na Rema mgbe ọ gara lụso Hazel eze Siria agha.+ Ehazaya* nwa Jehoram+ eze Juda gara Jezril ka ọ hụ Jehoram+ nwa Ehab n’ihi ahụ́ ahụ e merụrụ ya.*+ 7 Ma, Chineke mere ka Ehazaya nwụọ mgbe ọ gara ịhụ Jehoram. Mgbe ọ garuru, ya na Jehoram gara ka ha hụ Jihu+ nwa nwa* Nimshaị, onye Jehova họpụtara ka o bibie ezinụlọ Ehab.+ 8 Mgbe Jihu malitere ime ndị ezinụlọ Ehab ihe Chineke kpebiri ka e mee ha, ọ hụrụ ndị isi ebo Juda, hụkwa ụmụ ụmụnne Ehazaya, ndị na-ejere Ehazaya ozi. O gbukwara ha.+ 9 Ndị na-ejere ya ozi chọwaziri Ehazaya, mechaa jide ya ebe o zoro na Sameria, kpụtakwara ya Jihu. Ha gbuziri ya, liekwa ya.+ Ha sịkwara: “Ọ bụ nwa nwa Jehoshafat, onye ji obi ya niile chọọ Jehova.”+ O nweghị onye si n’ezinụlọ Ehazaya ga-achịli alaeze ahụ. 10 Mgbe Atalaya+ nne Ehazaya hụrụ na nwa ya nwoke anwụọla, ọ gara ka o gbuo ụmụ eze niile si n’ebo Juda.+ 11 Ma, Jehoshabịat* nwa eze zooro ezoro si ebe ụmụ eze ndị a chọrọ igbu nọ kupụ Jehoash+ nwa Ehazaya. O kunyere ya nwaanyị na-enye ya ara ma kpọba ha abụọ n’ọnụ ụlọ dị n’ime ime. Jehoshabịat bụ nwa Eze Jehoram.+ (Ọ bụ nwunye Jehoyada+ onye nchụàjà, bụrụkwa nwanne Ehazaya.) O zoro Jehoash ka Atalaya ghara ịhụ ya, nke mere na o gbughị ya.+ 12 E zoro Jehoash n’ụlọ ezi Chineke ruo afọ isii mgbe Atalaya nọ na-achị ndị obodo ahụ.
^ Na Hibru, “nwa.”
^ Ihe a kpọrọ ya n’Akwụkwọ Nsọ ụfọdụ ndị e ji aka dee n’oge ochie n’asụsụ Hibru bụ “Azaraya.”
^ Ma ọ bụ “n’ihi ọrịa ọ na-arịa.”
^ Jehoshabịat bụ nwaanyị.
2 Ihe E Mere 22